Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Bogaadin & Hambalyo-Labada Urur halgameed ee kala ah ONLF & SRDA, By: Xaaji M/rashiid
Maqaal: Bogaadin & Hambalyo-Labada Urur halgameed ee kala ah ONLF & SRDA, By: Xaaji M/rashiid
Posted by ONA Admin	/ September 9, 2018
Dalka Ogadenya oo la ogyahay inuu gacan guumaysi kujiro waxaa taarrikh fog iyo mid dhowba kas socday halgan Qori isu dhiib ah oy kala dhaxleen jiilal dhowr ah. Dhamaan halgamadaasi mayna ahayn kuwo laab lakac kuyimid ee waxay ku saleysnaayeen mabd’a qeexaya xuquuqda ay leeyihiin dadwaynaha Gobolka kudhaqani. Waxaa jiray guumayste cadaan ahaa oo xoog ku qabsaday shucuubta Afrika, balse markii lala dagaalamay kadib way ka huleeleen, sidaasayna qolo waliba ku qaadatay calankeedii gobanimada.
Dalka Ogadenya wuxuu kamid ahaa wadamadii ay cadaanku qabsadeen ee qaabka gurracan ee xaasidnimadu ku lifaaqantahay loogu wareejiyay Afrikaan kale. Waxaa si dhab ah talaabadaas uga horyimid waxgaradkii wadaniga ahaa ee waqtigaas joogay iyagoo qaatay wixii aalad dagaal ahaa oy markaas awoodeen, cadowgiina waxay gaadhsiiyeen heer uu faraha kaga gubto dalkii uu gardarada ku qabsaday. Wuxuu ku hongoobay dhamaan qoryaashii uu doonayay ee ay ka midka ahaayeen inuu kheyraadka Dalka boobo.
Guumaystuhu wuu ogyahay mar walba inuu daalim yahay, balse wuxuu isku qariyaa inuu horumar wado si uu usaldhigto, meesha gobanimodoonku uu ka diidanyahay inuu habeen nabad ugu baryo. Jabhadda ONLF ayaa la ogyahay inay si wayn ula soo dagaalantay Dawlad kusheegtii ay horboodayeen macangagii qowmiyadii Tigreegu. Duruufaha adag ee uu halgankaasi la kowsaday waxaa kamid ahaa burburkii Jamhuriyadii Somaliya, taasoo cadowgu u arkayay fursad uu kusoo afjari karo jabhadda iyo halgankeeda.
Hadaan hoos ugu dhaadhaco hadafka qoraalka waxaa Bishii August ee lasoo dhaafay wajiyo bashaash ah isku qaabilay xubno sarsare oo kamid ah labada Urur halgameed ee kala ah ONLF & SRDA. Kulanka oo lagu qabtay London ayaa ku saabsanaa sidii xorriyad loo gaadhsiin lahaa Dalka iyo Dadka soomaaliyeed ee ay mudada dheer itoobiya silcineysay. Waxa cusub ee saaxada kusoo kordhay ayaa ah inay labada urur isla qaateen inay yagleelaan magac kulminaya labadooda kaasoo ah Somali Coalition for freedom( SCF) oo la micana ah Isbaheysiga Xoreynta Somalida. Waxay si qotodheer u fahmeen inaan marxaladan laga gudbi Karin hadaan la mideynin maskaxda iyo muruqa umada Somaliyeed ee Gobolka.
Waxaa talaabadaas si aad ah usoo dhaweeyay dadwaynaha ku dhaqan Gudaha iyo Dibadaba. Anigoo kamid ah dadka sida aadka ah ula dhacay tilaabadaas ayaan hadana si gaar ah Bogaadin iyo Hambalyo hawada u marinayaa madaxdii soo abaabushay kulankaas. Waxay soomaalidu tidhaahaa far kaliya fool ma dhaqdo, sidaas darteed waxaa la odhan karaan waa mid kamid ah horumarka siyaasadeed ee Ururka ONLF uu waayahanba ku baaqayay oo uu ka dhabeeyay. Si kastaba ha ahaatee Aoonyahanada caalamka ayaa rumeysan in midnimada iyo wadajirku ay yihiin furaha guusha ee horumarka lagu gaadho.
Isku soo wada duuboo ilaa intay midoobeen labada Urur ee walaalaha ah oon wali Bil gaadhin ayay bulshadii saaqday Dabayl caafimaad qabta- Maashaa Allaah.